Manana fifandraisana mahomby amin'ny alàlan'ny fampidirana an'i Zeevou amin'ny Slack
Integrations » hiahotrahoranareo
Slack & Zeevou fampidirana
Amin'ny maha tompona manofa fialan-tsasatra anao na mpitantana anao, amin'ny fotoana sasany dia mila ataonao mora foana ny fifandraisana amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipao. Fa ny fitantanana ny fifandraisana eo amin'ny ekipanao dia mety hanahirana toy izany. Ity misy rehefa tonga hanampy anao i Slack. Afaka manana ny zava-drehetra amin'ny toerana iray ianao, azo karohina avy hatrany, misy na aiza na aiza alehanao. Slack dia manome hafatra fandefasana hafatra, fizarana antontan-taratasy ary fikarohana ho an'ny ekipa maoderina. Zaps avelao Slack hifandray amin'ireo fampiharana hafa ampiasainao. Azonao atao ny mandefa hafatra mandeha ho azy raha misy zavatra mitranga amin'ny rindranasa hafa na mampiasa ny hafatrao Slack hananganana ireo asa mandeha ho azy. Ka raha mampiasa an'i Zeevou ho rindrambaiko fitantanana fanananao ianao dia aza manahy mihitsy ny amin'ny fanitarana ny ekipanao. Ny fampidirantsika amin'ny Zapier mahatonga azy rehetra ho azo atao.
Ataovy havaozina hatrany ny ekipanao mandefa hafatra amin'izy ireo rehefa ilaina
Tantano tsara ny andraikinao amin'ny alàlan'ny fanampiana hafatra Slack misy kintana vaovao amin'ny Todoist, Trello, Jira, na fampiharana fitantanana tetikasa hafa
Manaova antso, zarao ny fisie, mifandraisa amina fampiharana marobe ary araho mora kokoa ny resakao noho ny mailaka.
midira ao amin'ny Slack